Dynamic Drive Pool / Ardis Technologies 'New HyperDDP12D | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Dynamic Drive Pool / Ardis Teknụzụ 'HyperDDP12D ọhụrụ
Ọdịnaya onye ọrụ mgbasa ozi na -emepụta okwu, yana ihe ọzọ ga-abụ ihe ngosipụta dị ukwuu bụ ngwaike ọ bụla mmepụta nke igwe mgbasa ozi na-esiteghị na ọgụgụ isi nke okike. Mana ihe ekwesịrị ịbanye na ya, bụ ngwaike na-akwado nnyefe nke ngosi ahụ. Dọkịnta Ọdọ Mmiri / Ardis Technologies ọkachamara na mpaghara ahụ, yana ndị ọhụrụ HyperDDP12D, ndị ọkachamara n'ime ụlọ ọrụ mgbasa ozi ji n'aka na ha ga-enweta ihe ha kwekọrịtara mgbe ha na-azụ ahịa maka ụdị ngwaahịa dị elu ga-eme ngosi ọ bụla ha mepụtara nnukwu ndị na-ege ntị.
Ihe di omimi Pool na Ardis Teknụzụ
Akụkọ nke Dọkịnta Ọdọ Mmiri / Ardis Technologies gaghachi na Netherlands. Dabere na Arnhem, ụlọ ọrụ Dutch a malitere dị ka ụlọ ọrụ ICT teknụzụ ya na ndị otu na-ahụ maka ya, ndị ọrụ injinia komputa na njikwa igwe, ndị ọkachamara na ngwa elektrọnikụ, atụmatụ ya na njikwa ngwaahịa & ozi. Ndi otu ndi okacha mara lekwasara anya n’idoputa uzo ihe nlere maka ngwa ahia ma obu oru ngo ndi gunyere elektrọnik na / ma obu ihe ngwaike. Ugbu a, Dọkịnta Ọdọ Mmiri / Ardis Technologies na-elekwasị anya na nrụpụta ya na mmepe ya Dynamic Drive Pool usoro.
Dọkịnta Ọdọ Mmiri / Ardis Technologies emeputa ihe Dynamic Drive Pool (DDP) usoro nke sistemụ SAN nke Ethernet nwere njikwa metadata wuru, Ardis Virtual File System AVFS.
The DDP na-enye oru ngo zuru oke na ọkwa faịlụ dabere maka ngwa dịka uchu, Final Cut Pro, Ngwaọrụ Pro, EVS, Adobe, Grass Ndagwurugwu, Telestream, Blackmagic imewe, DVS, Digital Vision, Autodesk yana ngwa ndị ọzọ niile nwere vidiyo ọ bụla, ọdịyo na ihe nkiri site na DV gaa 8K / DPX. Enwere ike itinye DDP na MAM na sistemụ ndabere, yana ya a pụrụ ịdabere na ya, nke dị mfe, ma dịkwa mfe iji. Ardis 'DDP nke ngwa DPP na-ekpuchi mkpa nke obere azụmaahịa, ụlọ ọrụ mmepụta igwe, mahadum, na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ ruo nnukwu postproduction na ụlọ ọrụ mgbasa ozi. n'ihi na Ardis Teknụzụ bụ ụlọ ọrụ sọftụwia na ngwanrọ, a na-ewulite ọrụ DDP n'ime ụlọ. Sọftụwia niile etinyere na DDP Series bụ naanị ihe onwunwe nke Ardis Teknụzụ, na tya DDP bụ SAN kacha dị mfe gburugburu.
Ardis Technologies 'ohuru HyperDDP12D bụ n'ezie ihe ndị ọrụ mgbasa ozi na-eju anya. Ngwaọrụ a bụ akụkụ nke usoro modul standalone nke edozi isi DDP. O nwere 1GByte / s bandwidth, a na-eji ya maka Post Production, agbasa ozi, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ Media & Entertainment. Ọ na-abịa na ọdụ ụgbọ mmiri 10GbE / RJ45 abụọ na oghere PCIe abụọ maka kaadi nchekwa Ekere òkè. Ọ nwere arụmọrụ ngwa ngwa SSD ngwa ngwa nwere HD ike maka ọdịyo (6000 tracks), vidiyo (iyi mmiri 35x DNxHD220), na ihe nkiri (4K, DPX), 2U, 4TB SSD, ikike TB, mpịakọta abụọ 36GbE / RJ10, Ethernet SAN.
Atụmatụ ndị ọzọ nke HyperDDP12D -agụnye:
Sọftụwia sụwara ngwanrọ na-arụ ọrụ na ihe ngosi V5
Modular na ikike na bandwidth agbatị n'ime otu faịlụ
SSD na HD ngwugwu na-echebe mwakpo
Oghere 4 ọzọ maka SSD ọzọ HD ngwugwu
Abịa na 1 afọ akwụkwọ ikike,
Nkwado ịzụta nwere ike iru 1200 Euro kwa afọ
Ndị ọkwọ ụgbọ ala desktọọti dị ugbu a anaghị akwụ ụgwọ mgbe niile. Mmelite DDP bụ akụkụ nke nkwekọrịta nkwado
Ihe DDP bu nke uzo, enwere ike izuta dochie mpaghara
Archiware Arụnyere P5
Enwere ike ị nye gị ikikere Kyno MAM
Enwere ike idobe ogwe aka ịma mma maka 165, - Euro
Ọrụ ya na ngwa niile na sistemụ MAM
Maka ozi ọzọ banyere HyperDDP12D, nleta www.ddpsan.com/our-products/hyperddp12d.
Ihe kpatara iji soro Ardis rụọ ọrụ nwere ike inyere ndị mgbasa ozi aka inyefe Ọrụ ka mma
N'ihe ngosi ọ bụla ọkachamara na-ekwupụta mgbasa ozi na-ewepụta, enwere ọkwa ọgụgụ ihe na-abanye ọ bụghị naanị ọdịnaya dị n'ọrụ ahụ mgbe nke ahụ ga-abụ mmalite ya. Ma na teknụzụ n'ozuzu ya na - arụpụta ga - abụrịrị kacha mma ma ọ bụrụ na ha ga - eme mmetụta dị mma na ọ bụghị naanị na - ewu ụdị, kamakwa na - ewu ụdị ndị na - ege ntị nke ga - anọgide na - abịaghachi maka ọzọ. Ardis ewerewo ibu ọrụ nke ịnọchite anya ndị na-emepụta ha n'ụzọ kachasị mma, ọ bụghị naanị na HyperDDP12D, kama na mmadụ niile Dynamic Drive Pool usoro.
Ọtụtụ n'ime ndị nrụpụta nke Ardis Teknụzụ arụ ọrụ gụnyere
Ọrụ ntanetị AWS Amazon
Elelọ ahịa Amazon
Ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ na-anọchi anya Ardis Teknụzụ ' ndị mmekọ. Mụtakwuo banyere ụlọ ọrụ ahụ site na ịga www.ddpsan.com/.
ATEME uchu Onye na-ahụ maka mgbasa ozi Igwe ahia mgbasa ozi ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi Dynamic Drive Pool usoro Dọkịnta Ọdọ Mmiri / Ardis Technologies Sistemụ eji ego SAN dị iche iche Graham Chapman Prmoted toEditor HyPerDDP12D Litra Matthews otu ụzọ nkwụsị ahịa dị post mmepụta SoftAtHome, MStar, CES2017 Ụgha & Akụrụ nchekwa Ngosi Injinia 2020-05-13
Previous: Onye na-arụ ọrụ igwefoto / Editor vidiyo
Osote: Jigsaw24 na-agbasawanye Via24 Cloud Services Na ndenye nke EFSv nke EditShare